Studentsmụ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ Uganda mepụtara ngwa eji ekwu okwu gbasara ọrịa ịba - Afrikhepri Fondation
Fraịdee, Ọgọst 7, 2020
Ụmụ akwụkwọ Uganda na-eji ngwa mkpanaka na-achọpụta ọrịa ịba
Lnyocha ọbara. Dijitalụ mgbanwe ugbu a na-enye ohere ịchọpụta… ya na ama! Ngwa ekwentị nke nwere ike ịchọpụta ọrịa ịba bụ nzuzu nzuzu nke ụmụ akwụkwọ anọ ndị Uganda a na Mahadum Makerere (Kampala), akụkọ IPS.
N'ime afọ 21, Brian Gitta enwetawo ọtụtụ nyocha ọbara ka o mepụtara phobia nke añala, ka akwụkwọ ahụ na-ekwu. N'oge ọrịa ikpeazụ ya na Disemba 2012, ọ ghaghị ịnọ na bedridden ma were ya "ụlọ ọrụ ọgwụ" na-enye nyocha ọhụụ ngwa ngwa. Ozugbo a gwọrọ ya, ọ na-arụ ọrụ a, nke ahụ bụkwa otú e si mụọ Matibabu smartphone (nke pụtara "ụlọ ọgwụ" na Swahili).
Ọrịa ịba bụ ọrịa nke ebe okpomọkụ na-ebute site na anwụnta, kwuru na saịtị ahụ. IPS kwuru na ihe gbasara 42% nke ndị bi na Uganda (nde mmadụ 34,5) na-emetụta ọrịa ahụ. N'agbanyeghi oke onu ogugu onwu site na oria iba n'Afrika, n'etiti 70.000 na 100.000 ndị mmadụ na-anwụ kwa afọ na mba ahụ, dị ka ọnụ ọgụgụ NGO Consortium Malaria Uganda ederede ya.
Ngwa Matibabu nwere ike ịchọpụta nje ahụ tupu mmalite nke mgbaàmà, kwuru na saịtị ahụ. Onye ọrụ ahụ tinye mkpịsị aka ya na ngwaọrụ omenala, "matiscope", jikọọ na smartphone, iji nyochaa ọbara ọbara ọbara ya, na-akọwa isiokwu ahụ. N'ihi ọdịiche dị n'etiti ọdịdị dị n'etiti mkpụrụ ndụ nje na mkpụrụ ndụ ahụike, ngwa ahụ nwere ike ịchọpụta ịba n'enweghị ọbara, kwuru IPS.
Uru ọzọ nke ngwa ahụ, dị ka saịtị ahụ si kwuo: a na-eziga ya na folda nchekwa Microsoft ka ọ bụrụ na ị ga-ekerịta dọkịta ahụ ozugbo.
Dika onye nduzi nke ulo oru ahuike na Kampala nke IPS kwuru, ngwa a ga-emeso oria iba n'oge mbu, tupu ya enwee ike ime ka nsogbu uche ma obu ndi ozo di ka anemia. Maka ndị inyom dị ime, karịsịa na-arịa ọrịa ahụọ ga-egbochikwa ịkwa iko.
A na-atụ anya na ngwa ahụ ga-ere ahịa n'ime afọ abụọ, buru amụma na otu n'ime ndị okike. Ọ ga-abụ free ma ga-eri n'etiti matiscope 20 na 35 dollar, a ịrịba nchikota ọtụtụ Uganda, ad ngalaba. Karịsịa kemgbe, dị ka chetara site a ụmụaka ọkachamara jụrụ IPS, ịba na-emetụta ọtụtụ ndị mmadụ n'ime ime obodo na-adịghị enwe ohere smartphones na Internet.
AHỤ: Slate Africa
Lelee ndụ nke Miles Davis (2016)
Marcos Xiorro, ohu nke nọ na 1821 na-eche echiche nnupụisi na Puerto Rico
Negro Nations na ọdịbendị
29 agobọchị gara aga
Studentsmụ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ Uganda mepụtara ngwa eji ekwu okwu gbasara ọrịa ịba.